အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: 05/28/08
ကျွန်တော် Gtalk ထဲကို ၀င်ဝင်ခြင်း ပလုံ ပလုံနဲ့ Gtalk က Message တွေ ချက်ခြင်းတက်လာလို့ ဘယ်သူများ လဲ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့် အစ်ကိုတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ လူမိုက်ကြီး ဖြစ်နေပါတယ်..။ ကျွန်တော်သိလိုက် ပါတယ်…။ ကျွန်တော်တော့ ဒီနေ့ညနေ ထမင်းငတ်ပြီဆိုတာကို…။ :P
“ EOT လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပျောက်သွားတာ ဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲ.. ပုံပြောတာလား..?”
“မဟုတ်ပါဘူး အစ်ကိုရာ..။ ကျွန်တော် မအားလို့ပါ..။ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းလာခဲတာလဲ အစ်ကို သိရဲ့သားနဲ့ ကျွန်တော် အခုလုပ်ပေးပါ့မယ်…။ အိုကေလား? Blog ရဲ့ Email နဲ့ Password ပေး”
“ရပြီ...ခဏစောင့် အခုလုပ်မယ်..ငြိမ်ငြိမ်နေ အမှီးမလှုပ်နဲ့ နားရွက်မခတ်နဲ့.. :P”
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ EOT စစ်ဆင်ရေးစပါတော့တယ်…။ ကျွန်တော့်စက်ထဲမှာက လုပ်ပြီးသားရှိ တော့ သူ့အကောင့်နာမည်နဲ့ Googlpage ထဲဝင် File တွေ Upload လုပ်ပြီး Code တွေ ကို Blog ရဲ့ HTML ထဲထည့်…။ အထဲမှာ ပြင်စရာ ရှိတဲ့ Font တွေကို သေသေချာချာ လိုက်ပြင်လိုက်ပါတယ်…။ သူကလည်း EOT ရမရကို စစ်ဖို့အတွက် သူ့စက်မှာ ရှိတဲ့ GtalkMyanmar Font တွေကို Uninstall လုပ်ပြီး အသင့်ထိုင်စောင့် နေပါတယ်..။
“ အိုကေ..ရပြီ။ ကြည့်လိုက်တော့”
“ဟာ…. သေသေချာချာ ကြည့်ပါအုံး အစ်ကိုရာ…။ ကျွန်တော်သေသေချာချာ လုပ်လိုက်တာပါ”
“ သြော်…ငါက မင်းကိုနောက်မလားကွ တကယ်မရသေးလို့ မရဘူး ပြောတာပေါ့”
“ ဟုတ်သေးဘူးနော်.. တစ်ခုခုမှားနေပြီ။ နေအုံးဗျာ နောက်တစ်မျိုး ထပ်စမ်းကြည့်မယ်…”
ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်အစ်ကို တစ်ယောက် (စုစုပေါင်း နှစ်ယောက်) တော်တော်ကို ခေါင်းစား နေကြပါ တယ်..။ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ တတ်သမျှ ပညာလေးတွေနဲ့ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုးလုပ်ကြည့်တာ ပညာသာ ကုန်သွားတယ်.. Blog က ဘာမှမထူး..။ လေးထောင့်ကွက်တွေက လွဲပြီးဘာမှ မပေါ်ဘူး..။ တစ်ဘက်မှာ EOT စစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲ နေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း ၀မ်းတွင်း ပြည်တွင်းစစ်က ဖြစ်နေပါပြီ..။ “ အာ...မထူးပါဘူးကွာ ပြီးမှပဲ စားတော့ မယ်”။ ခေါင်းတင်မကဘူး ကျွန်တော့် အစာအိမ်ထဲမှာလည်း မီးတောက် နေပါပြီ…။ မီးတောက်ရုံမကလို့ ပြာသာ ကျသွားမယ် EOT ကတော့ ဘယ်လိုမှမရ…။
“အစ်ကို ဒီလိုလုပ် ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ စာတစ်ပုဒ် စမ်းတင်ကြည့်လိုက်မယ်…။ ပေါ်လားမပေါ်ဘူး လားသာ ပြော.. အိုကေလား”
“ဟင်… မင်းဘာတင်လိုက်တာလဲ ဒီမှာ ဘာမှလည်းမပေါ်ပါလား..”
“အာ..တင်လိုက်ပါပြီဆို ဘာလို့မပေါ်ရမှာလဲ…ဒီမှာလေးဗျာ Mike Kan ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် Header အောက်မှာစာ ပိုဒ်ကြီးက ပြူးတူးပြဲတဲနဲ့တောင် ပေါ်နေတာကို”
“အမ်..? ဘာ…? မိုက်ကန်း…? ဟုတ်လား….?”
ကျွန်တော့်တအံ့တသြ ဖြစ်နေလို့မဆုံးခင်မှာပင် တစ်ဖက်က သူ့အသံဗြဲကြီးနဲ့ တဟားဟား ရီနေတဲ့ အမောင် လူမိုက်ရဲ့ ရယ်သံတွေဟာ စကားလုံးတွေ အဖြစ်နဲ့ ကျွန်တော့် Gtalk Message Box ထဲကို တပလုံ ပလုံနဲ့ တက်လာပါတော့တယ်…။ ကျွန်တော်လည်း ကောင်းကောင်းကြီးကို သဘောပေါက် လိုက်ပါပြီ…။ ကျွန်တော် လုပ်ထားတဲ့ EOT ဘာလို့ အဆင်မပြေလဲဆိုတာ…။ ဟိုဘက်က လူမိုက်ကြီးလဲ ရီနေတာ အသက်တောင် ပါသွားမလား အောက်မေ့ရပါတယ်…။
“ဂါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ….ဒီလူကြီးတော့ နာ တော့မယ်..”
စဉ်းစားကြည့်ကြပါအုံးဗျာ…။ သူ့ Blog မှာ ဘယ်လိုလုပ် ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတဲ့ EOT က အဆင် ပြေပြီး မြန်မာစာလုံးတွေ ဘယ်ပေါ်မလဲ…။ သူကြည့်နေတာက သူ့ရဲ့အဓိက နွေမုန်တိုင်း ဆိုတဲ့ Blog။ သူကျွန်တော့်ကို ယောင်ပြီးပေးလိုက်တာက (တမင်များ ပညာပြသလား မသိ :P ) သူအကြမ်းလုပ်နေ တဲ့ Mike Kan ဆိုတဲ့ Blog ရဲ့ Email..။ အဲဒီတော့ဗျာ ခုတ်ရာတစ်ခြား ရှရာတစ်ခြား..။ ဘယ်ပေါ်ပါ တော့မလဲ..။
ကဲ …. ကောင်းကြသေးရဲ့လား အရပ်ကတို့ရယ်…။
p.s-ကျွန်တော်တို့ကို ခွဲခွာသွားတဲ့ အစ်ကိုလို သူငယ်ချင်းလို ခင်ရတဲ့ နွေမုန်တိုင်း အတွက် အမှတ်တရပါ။
Posted by Pyiet Oo Aung at 6:45 PM 14 comments: